गोल्डकप – Himalaya Television
१६ असोज २०७८ म्याग्दी । प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा आयोजना हुने ‘तोरन्ल गोल्डकप’ तारा (आर्चरी) खेल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन रु ५१ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । थकाली सेवा समितिले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका थकाली समुदायबाट चन्दा सङ्कलन गरेर ‘तोरन्ल्ह...
संकटा क्लबलाई आहा रारा गोल्डकपको उपाधि, अफ्रिकन रुट्स ४–० गोलअन्तरले पराजित
२८ चैत २०७७ पोखरा । संकटा क्लबले पहिलोपल्ट आहा रारा गोल्डकप फूटबलको उपाधि जितेको छ । पोखरा रंगशालामा आज भएको फाइनलमा टाइब्रेकरमा अप्रिकन रुट्स युनाइटेडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले पराजित गर्दै संकटाले उपाधि जितेको हो । संकटाले पहिलो पटक...
आहा रारा गोल्डकप फूटबलको फाइनल, संकटा र अफ्रिकन रुट भिड्दै
२८ चैत २०७७ पोखरा । पोखरामा जारी १९ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फूटबलको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ । प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा संकटा क्लब र अफ्रिकन रुट एसोसियसनले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन् । फाइनल अघि दुबै टोलीका प्रशिक्षक र...
आहा रारा गोल्डकप फुटबलको फाइनल भोलि हुँदै
२७ चैत २०७७ पोखरा । पोखरामा जारी १९ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फुटबलको फाइनल खेल भोलि पोखरामा हुँदैछ । पोखरा रंगशालामा हुने फाइनलमा संकटा क्लब र अफ्रिकन रुट एसोसियसनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । फाइनलका लागि मैदान उत्रदा दुबै टिमको...
आहा ! रारा गोल्डकपमा आज नेपाल पुलिस र अफ्रिकन रुट एसोसिइसन भिड्दै
२६ चैत २०७७ पोखरा । पोखरामा जारी १९ औं आहा ! रारा गोल्डकप फूटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेल आज हुँदैछ । रारा गोल्डकप फूटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र अफ्रिकन रुट एसोसियसनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । हिजो संकटा...
थ्रीस्टारलाई ४–० ले हराउँदै पुलिस आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाइनल प्रवेश
२४ चैत २०७७ पोखरा । नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी आहा रारा गोल्डकप फूटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । पोखरा रंगशालामा आज भएको अन्तिम क्वाटरफाइनलमा थ्री स्टार क्लबलाई ४–० गोल अन्तरले हराउँदै पुलिस अन्तिम चारमा पुगेको हो । पुलिसलाई...
आहा रारा गोल्डकपमा आज थ्रीस्टार र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दै
२४ चैत २०७७ पोखरा । पोखरामा जारी आहा रारा गोल्डकप फूटबलमा आज थ्रीस्टार क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतियोगिताको चौथो तथा अन्तिम क्वाटरफाइनलमा आज थ्रीस्टार र पुलिसले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन् । यसअघि पहिलो खेलमा आयोजक सहारा...
आहा रारा गोल्डकपमा मनाङ मर्स्याङ्दी विजयी, संकटा १–० ले विजयी
२३ चैत २०७७ पोखरा । साविक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहा रारा गोल्डकपको पहिलो खेलबाट नै बाहिरीएको छ । आज भएको खेलमा संकटा क्लबसँग १–० ले पराजित भएपछि मनाङ मस्र्याङदी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो । पोखरा रंगशालमा भएको खेलमा संकटालाई...